Akụkọ - Ọka na-acha ọka na-ebili, ndị na-emepụta na-abawanye ọnụ ahịa otu na ọzọ, yana ahịa lysine na threonine na-awụlikwa elu
Oka ọka na-arị elu, ndị na-emepụta na-abawanye ọnụ ahịa otu otu na ọzọ, ahịa lysine na threonine na-awụlikwa elu
Mgbe emume mgbụsị akwụkwọ Mid-mgbụsị akwụkwọ na ụbọchị mba, ọnụahịa ọka arịgoro elu, ọnụ ahịa zụrụ ebe a ugbu a akarịala yuan 2,600, afọ anọ dị elu. N'ịbụ ndị ọnụ ahịa na-arị elu na-emetụta, ụlọ ọrụ lysine na threonine ebuputala okwu ha otu otu. Ahịa lysine na threonine ekpochapụla n'oge gara aga, ọ wụliri elu. Ka ọ dị ugbu a, ahịa ahịa 98% lysine bụ 7.7-8 yuan / kg, na ọnụ ahịa 70% lysine bụ 4.5-4.8 yuan / kg. Ahịa threonine Ọnụahịa bụ 8.8-9.2 yuan / kg.
Ahịa ọka ọka “na-eto n'ike”
Afọ ọhụrụ nke ugwu ọwụwa anyanwụ afọ a tara ajọ ifufe ugboro atọ. Ginglọ obibi buru ibu kpatara ihe isi ike n'ubi ọka. Ọganihu ngwa ngwa nke nchịkọta ọka ọhụrụ na atụmanya ahịa siri ike. Companieslọ ọrụ dị ala na-ebuli ọnụahịa iji jide ọka. Ndị na-eto eto elu na-achọghị ire. Ahịa ọka bilitere n'ọnwa Ọktọba. , Ka ọnwa Ọktọba 19, ọnụahịa ụlọ nke ọka bụ 2387 yuan / ton, elu 5.74% ọnwa n'ọnwa na 31.36% kwa afọ. Ọnụ ego ọka starch bilitere site na 2,220 yuan kwa ton na mbido afọ a rue yuan 2,900 kwa ton n'izu a, mmụba nke karịa 30%. N'otu oge ahụ, ịrị elu ngwa ngwa emeela ka ahịa ahịa na-akpọ oku, mana ọnụahịa ahụ ka dị elu. N'oge na-adịbeghị anya, ọnụahịa nke ihe ọkụkụ ebiliwo ma ọ siri ike ịzụta, nrụgide ọnụahịa nke ụlọ ọrụ nhazi miri emi abawanyela nke ukwuu. Ha agbasoro ngwa ngwa ma bulie ihe ha kwuru.
Ike ịzụlite ezì nke ụlọ na-aga n'ihu na-agbake
Ọchịchọ ụlọ na-arịwanye elu. Na nso nso a, ọnụ na-ekwuchitere National Bureau of Statistics kwuru na ka ọ na-erule ngwụsị nke atọ nke atọ, ọnụọgụ ezì dị nde 37.39, mmụba kwa afọ nke 20.7%; n'etiti ha, ọnụ ọgụgụ nke ịgha mkpụrụ bụ 38,22 nde, mmụba nke 28,0%. Ihe data nke ndi oru ahia ahia gha achoputa ngbanwe nke ikike ezì. Na Septemba, nri ezì bụ 8.61 nde tọn, mmụba nke 14.8% kwa ọnwa na mmụba kwa afọ nke 53.7%. N’ọnwa itoolu gara aga, nri ezì kwa ọnwa abawanyela n’ọnwa n’ọnwa ewezuga Jenụwarị na Mee; ọ gbalitewo kwa afọ n’afọ maka ọnwa 4 n’usoro kemgbe ọnwa Juun. Ochicho nke ndi ala ozo adighi ike, oria okpueze ohuru na Europe na United States weghachitere ugboro abuo, onodu aku na uba megharia ozo na nkeji nke ano, na-abu uzo nke abuo.
Na mkpokọta: ọchịchọ ụlọ na-arịwanye elu, ọchịchọ mba ọzọ adịghị ike, ọnụahịa ọka na mbido dị elu, ọnụego mbupụ nke amino acid na-ebelata, ụfọdụ ụlọ ọrụ lysine na threonine nọ na mpaghara mmebi. Amino acid na ụlọ ọrụ na-emepụta threonine nwere ihe isi ike na iwe ihe ubi, ọnụego ọrụ dị ala, nrụgide ọnụ ahịa pụtara ìhè karị, omume ọnụahịa siri ike, ahịa na-akwado site na arụmọrụ siri ike, usoro ndị chọrọ ị attentiona ntị na ọka ahịa na mgbanwe na ọnụego ọrụ nke ndị nrụpụta.
Post oge: Ọkt-26-2020
L-Threonine Pharm ọkwa, L-Threonine Nri Nri, Nri oriri na-edozi ahụ, 73-32-5 L-Isoleucine, Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine, L-Valine 72-18-4,